I-Apple Watch yakhelwe izikhathi zokugqoka ezimfishane nezisheshayo | Ngivela kwa-mac
I-Apple Watch yakhelwe izikhathi zokugqoka ezifushane nezisheshayo
Bengihlele ukubhala le ndatshana ngaphambi kokuthi ngithenge iwashi. Futhi ngukuthi uJohn Ive uqobo kanye nezinye izikhulu eziphezulu zenkampani baphawule kakhulu ngayo. I-Apple Watch ayakhelwanga thina ukuthi senze imisebenzi esiyenza ku-iPhone lapho. Akusona isikrini lapho ungaxhumana khona futhi ufunde izindaba noma ubuke amanethiwekhi kwezenhlalo. Singaphendula emilayezweni, izaziso nakwezinye izimo ezithile, kepha akudizayinelwe lokho.
Umqondo ukuthi akudingeki ukuthi siwusebenzise imizuzu emi-2 noma emi-3 ngokuqhubekayo siphequlula isikhombimsebenzisi sayo esincane Umqondo ukwenza izinto zigcine isikhathi, zisheshe futhi zisebenze njengesesekeli ku-iPhone. Naphezu kwakho konke, abanye onjiniyela nezinye izinhlelo zokusebenza ezidume kakhulu benze uhlelo olucace kakhulu abazama ngalo ukuthola ukwethembeka komsebenzisi futhi bakwenze kube lusizo kakhulu. Iphutha. Abasebenzisi abashintshi isikrini esikhulu sencaneSikusebenzisa njengesihlanganisi nanjengedivayisi yezempilo egqokekayo, iwashi, izaziso nokuningi.
1 Ukusetshenziswa kwangempela kwe-Apple Watch namuhla
2 Idivayisi yezempilo nezemidlalo
Ukusetshenziswa kwangempela kwe-Apple Watch namuhla
Uma bengivele nginezimpikiswano nokuningi engizokuphawula ngaphambi kokukuthenga, manje njengoba sengizamile futhi nginakho engalweni yami ngingaqinisekisa futhi ngiqinisekise amagama ami. Kuzoba nabasebenzisi abafuna ukuyisebenzisa ukuze bafunde yonke imilayezo, babuke izingxoxo ze-Twitter nomugqa wesikhathi, kepha akuyona ukusetshenziswa okufanele. Ngalokho, khipha i-iPhone ngaphandle kokwesaba bese uqhubeka. Inkululeko, usayizi futhi uzisindisa ungumbumbulu. Wenza imisebenzi esheshayo, uphendule imiyalezo, uthintane nemininingwane ephathelene nempilo nokuzivocavoca umzimba futhi uyilungiselela ukuphuma ukuyoziqeqesha.
Ngemuva kwakho konke, umqondo wokubuka okugqokekayo nokuhlakaniphile usesetafuleni. Kungabasebenzisi okuthi ngokusebenzisa kwabo kwansuku zonke namazwana abo basiza izinkampani ukuthi zisho ukuthi zifuna ukuwasebenzisela ini lawa nokuthi kungani kungenjalo. Njengoba izinhlelo zokusebenza ziyinkimbinkimbi futhi zivumela okuningi ukwenziwa ngewashi, mhlawumbe abasebenzisi abafuni ukukwenza. Akulula yini ukuphuma i-iPhone wenze lokho okufanele sikwenze? Kuyashesha futhi kuphumelele, kunjalo. Ngakho-ke, izinto ezinjengalezi zenziwa kuselula yethu, futhi i-Apple Watch ikhawulelwe ezintweni ezisheshayo nezempilo.
Kubonakala kanjena, mhlawumbe labo abangadlali imidlalo bangacabanga ukuthi i-Apple Watch ayifanele noma iyinto nje ebizayo. Ngempela, kunjalo. Ukuthola okuningi kukho, kuzofanele usebenzise yonke imisebenzi yayo. Kuneminye imisebenzi ongasebenza nayo nokunye okunjalo, kepha ungalindeli ukukhiqizwa okuthile okuguqukayo kuwashi.
Idivayisi yezempilo nezemidlalo
Iyidivayisi egqokekayo yezempilo, yabasubathi, yokuzivocavoca umzimba njll. With lokusebenza Ngikuqeqesha ukuthi ungakujabulela konke ukukala kokuqeqeshwa kwakho noma ngabe yini umsebenzi noma umdlalo. Futhi hhayi ngezinhlelo zokusebenza zomdabu kuphela, onjiniyela badalele okuningi kwezemidlalo. Futhi okudume kakhulu yilokho okusebenzisile ne-iPhone yakho. I-Runstastic, i-Nike + Club nengiyithandayo kunazo zonke: Carrot Fit.
Lesi sakamuva sikugqugquzela ukuthi uzivocavoce ngenkathi ukudelela ngendlela ethile. Isithonjana salo siluhlaza lomuntu okhuluphele omele umsebenzisi. Uma ungafinyeleli ezinhlosweni zakho zansuku zonke, kuzokukhombisa ukugqwayiza lapho kulimaza khona isithunzi. Ishaya ngogodo oluhlakazekile, uphuma ezama ukugxuma ngaphandle kokuphumelela nezisindo ngendlela eyisimanga.
Noma ngabe yimuphi umdlalo owenzayo, uma ufuna imitha enhle evumelaniswe ngokuphelele ne-iPhone yakho, hamba i-Apple Watch Series 2 ngaphandle kokungabaza. Kepha khumbula ukuthi akuyona i-iPhone noma i-iPad. Asikhulumi ngedivayisi yokwenza izinto, kepha lapho sizobona khona futhi sisebenzisane ngokushesha. Usazodinga i-iPhone futhi uzoyikhipha ephaketheni lakho cishe ngokulingana. Kuya futhi nokuthi uzivumelanisa kanjani newashi nezinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo. I-Telegram isebenza kahle, kepha ngincamela ukufunda nokuphendula ku-iPhone.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » I-Apple Watch yakhelwe izikhathi zokugqoka ezifushane nezisheshayo
I-Apple ngeke yethule i-iPad Pro 2 ngo-Okthoba, noma akufanele
Ngo-Okthoba 27 i-Apple izomemezela imiphumela yayo yakamuva yezezimali